ရခိုင်တပ်မတော်-AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်(တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်) > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / ရခိုင်တပ်မတော်-AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်(တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်)
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ July 30, 2016 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 646 Views
ဇူလိုင်လ ၂၆-၃၀ ရက်နေ့များတွင် KIO ကချင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေ မိုင်ဂျာယန်တွင် ကျင်းပနေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်နေသော ရခိုင်တပ်မတော်-AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်အား မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အလွတ်တန်းသတင်းထောက် “အိုက်စိုင်း” တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မေး။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လက အစိုးရကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း တို့ နဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရတယ်။ အဲဒီမှာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ ဘယ်လို ကိစ္စရပ်တွေကို သဘောတူညီမှုရယူနိုင်ခဲ့ပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်တော့ မဆွေးနွေးဖြစ်ပါဘူး။တွေ့ဆုံမူအချိန်ကတော့ ၂၅ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီက အရင်ချိတ်ဆက်ပြီးမှ သွားတာတော့မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ မဟာမိတ် သုံးဖွဲ့လုံးကလည်း မိုင်းလား မှာ ရောက်နေတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ လည်း လာတယ်လေ။ လာတော့ အိမ်ရှင်ကနေ တွေ့ကြည့်ပေါ့လေ အဲလို ပြောဆိုလာတာရှိတယ်။
အဲ့ဒီအပေါ်မှာ တွေ့တာပါ၊ တွေ့တော့ သူတို့ကလည်း Mandate မပါဘူးပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် မီဒီယာကို မတင် ပါနဲ့လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်းမတင်ခဲ့ပါဘူး (နောက်မှဘဲ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ကိုယ်တိုင်ကလည်း တွေ့ပြီးပြီလို့ ပြောလာတဲ့ အနေအထားမှာဘဲ) ကောင်းပြီပေါ့နော်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို အရင်ကတည်းက ပြောထားပြီးသားပါ လက်နက်စွန့်ရမယ်ပေါ့လေ ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဒါကလည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ တောင်းဆိုချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ကလည်း လူချင်းတွေ့လို့ ပြောဆိုကြည့်ဆိုလို့ တွေ့ကြည့်တာပေါ့လေ၊ ထွေထွေထူးထူးတော့ သိပ်မပြောဖြစ်ပါဘူး။ အပေါ်တင်ပြရအုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာဘဲ၊ ပြီးရင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ဇော်ဦး(ငြိမ်း)ပါတယ်လေ။ သူကတော့ နည်းနည်း စစ်သား စကားပြောတာပေါ့၊ မင်းတို့လုပ်တဲ့ ပြဿနာ မင်းတို့ ဖြေရှင်းရမယ် ဘာညာပေါ့ အဲလိုတွေတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြီးရင် ကြေညာချက်တစ်ခုပေါ့နော်၊ တောင်းပန်ရမယ်ပေါ့ ပြည်သူကို တောင်းပန်ရမယ်။ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်တဲ့ အလုပ်က မှားပါတယ်ဆိုတဲ့ အဲလိုမျိုးပေါ့လေနော် ပြောတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မလွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စပါ၊ ပိုပြီးတောင် ခက်ခဲပါသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ဒါယုံကြည်လို့ဘဲ အသက်ကို ပေးပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ပဲလေနော်၊ ကျွန်တော်တို့လစာ မရဘဲလုပ်နေတာ၊ အသေခံပြီးမှ ဒါက ကျွန်တော်တို့ ယုံ ကြည်လွန်အားကြီးလို့လုပ်နေတာ၊ ယုံကြည်မှု လက်နက်ဆိုတာကတော့ ချလို့မရပါဘူး။
စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် နာကျဉ် ကြတာပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ကျဆုံးရင် ကျွန်တော်တို့လည်း နာကျဉ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည် အကျိုးကို လိုလားတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားတယ် ဆိုရင် ဒါတွေကို ခဏမေ့ထားပြီးတော့မှ ရှေ ့ကို ဘယ်လိုသွားနိုင်တယ်။တိုင်းပြည်က ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာ ကို အရင်စဉ်းစားစေချင်တယ်လေ။
မေး ။ ။ တပ်မတော်ဘက်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ် ကို စွန့်ရမယ်လို့ ပြောဆိုထားတဲ့အပေါ်မှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်တို့ အဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ စဉ်းစား ထားပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဒါက မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ အဲ့ဒါကလည်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ပါးစပ်နဲ့တောင်းဆိုလို့မရလို့ လက် နက်နဲ့ဘဲတောင်းဆိုရတာပေါ့၊ လက်နက်နဲ့တောင်းဆိုရင်လည်း နိုင်ငံလည်း နစ်နာတယ်လေ။ သူတို့ (တပ်မတော်)လည်း မလျော့ဘူး ကိုယ်လည်း မလျော့ဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားတွေပေါ့နော်။ ပြီးရင် ယုံကြည်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိဘဲနဲ့ လက်နက်ကို စွန့်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းကို ခက်ခဲပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်လို့ တပ်မတော်ကို တည်ဆောက် တာပေါ့နော်။ လက်နက်စွန့်လွှတ်ရေး တောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ တောင်းဆိုချက်လို့ မြင်ထားတယ်။
မေး ။ ။ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံ မှာ ပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် အစိုးရ နဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ်တို့ အကြား ဘယ်လို နားလည်မှုတွေရယူထားပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီညီလာခံကို တက်ရောက်ပြီးမှ ကိုယ်ရဲ ့လူထုအတွက် ရသင့် ရထိုက် တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ ရပ်တည်ပြီးမှ ဆွေးနွေးချင်တယ်လေ။ဒီလိုမျိုးဘဲ အဖြေရှာချင်တယ်။ အခုက အစိုးရကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရကလည်း အကုန်လုံးပါဝင်ရမယ်လို့ ပြောထားတယ်။သို့သော်လည်း NCA (တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးစာချုပ်)ကို ဖြတ်သန်းရအုံး မှာလေ။ NCA ကို ဖြတ်ရအုံးမယ်ဆိုတော့ သူတို့က တောင်းဆိုချက်က ကြားထဲမှာ ရှိနေလေတော့ ဒီကိစ္စ က တော်တော် ခက်ခဲမယ်ထင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံမှာ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ဗိုလ်မှူချုပ်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို အကြောင်း အရာတွေကို တင်ပြ ဆွေးနွေးသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ အဲဒါတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မူလ ရပိုင်ခွင့်တွေပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ ဟာတွေပေါ့။ အခုလည်း အဲ့ဒီ မူတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ ညီလာခံမှာ ညီလာခံထဲမှာပဲ ဒီအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်မယ့် အခြေခံမူပေါ့။ ပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမျိုး တစ်မျိုးတည်းက ကြီးစိုးနေတဲ့ တပ်မတော်ဆိုရင် တခြားလူမျိုးတွေ အရမ်း နစ်နာတယ်လေ။ လုံခြုံမှုလည်း အာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူး။ အဲ့ဒီအပေါ်မှာ ဒီပြည်ထောင်စု ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့သေသပ်မှု တခြား သော လူမျိုးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကို အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ စစ်ရေး ဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းပေါ့ လေနော်။ အကုန်လုံး အချိုးညီညီနဲ့ တိုင်းပြည် တာဝန်ယူရမယ်ပေါ့လေနော်။ အဲ့ဒါတွေ အတွက်လည်း လုံခြုံရေး နှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူတချို ့ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ သဘောတူထားတာတွေတော့ ရှိနေပါတယ်။
မေး ။ ။ အကယ်၍ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်တို့ ပါဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုရင် ဗိုလ်မှူးချုပ် တို့ တင်ပြ လိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ညီလာခံမှာရောက်သွားဖို့အတွက် ဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ပြုလုပ်နေပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ တချို ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော် ညီလာခံမကျခင် အခုလည်း တချို့ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေတွေကနေ တစ်ဆင့် စာတစ်စောင် ပို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်းမှာပေါ့လေ ဒီနေ့(ဇူလိုင် ၂၈) ရောက်သွားမယ်လို့ ထင်တာပါဘဲ။ ရောက်သွားမှာပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆီကိုပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ စစ်အစိုးရ သို့မဟုတ် စစ်အစိုးရတစ်ပိုင်း အစိုးရပေါ့နော်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရပေါ့ ကျွန်တော် တို့ ဒီအတိုင်းပဲ ပြောကြပါတယ်။ တော်လှန်ရေး နယ်ပယ်မှာတော့ သူတို့ လက်ထက်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ က အရပ်သား စစ်စစ် အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေး စကားပြောဖို့အတွက် အရင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ သဘောထားကို ဖော်ပြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာ မရခင် ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြီးမှ ကျွန်တော်တို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့ သဘောကို ကြေညာထားခဲ့တယ်။
ပြီးရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရပေါ့နော် ဒီနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရ လက်ထက် ရောက်ပြီးမှလည်း ကျွန်တော်တို့သုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီးမှ(AA၊ MNDAA၊ TNLA)ဒီမိုကရေစီကျကျ ရွေးထားတဲ့ အစိုးရ၊ အရပ်သား အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးလိုတယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်တွေကော အကုန် ကိုးကားပြီးမှ စာတစ်စောင်ပို့ထားပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာတော့ ဘယ်လို တုန့်ပြန်လာမလည်းဆိုတာ မသိသေးပါဘူး။
မေး ။ ။ အခု မိုင်ဂျာယန် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်တို့ တက်ရောက်လာတာ တွေ့ရ တယ် ခင်ဗျာ။ အဲဒီမှာကော ဗိုလ်မှူးချုပ်တို့ အနေနဲ့ ဘာတွေ တင်ပြဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာရှိပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲက ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ တော်တော်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှိ တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ပြည်ထောင်စုအခြေခံမူတွေ၊လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အပိုင်းတွေတော့ ရောက်ပြီးဗျာ။ အခြေခံမူတွေချတဲ့ အထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ တော်တော် ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက လည်း နှစ်ပေါင်း ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုနဲ့ ချီပြီးမှ ဒါတောင် မကပါဘူး ၂၀ဝ၀ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ခေါင်းဆောင်တွေ ဆွေးနွေးလာခဲ့တဲ့ မူကြမ်းတွေက ရှိပြီး သားလေနော်။
အဲဒါတွေကို အတည်ပြုယူတဲ့ သဘောဖြစ်တယ်၊ ပြီးရင် ဒီကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးကဏ္ဍတွေကိုလည်း ပိုပြီးမှ စေ့စပ်သေချာအောင်ပေါ့ အဲ့ဒါတွေကိုလည်း ပြောဖြစ်တယ်။ ဒီထက် နည်းနည်း ပိုအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စ တွေကိုလည်း မနက်ဖြန် ပြောကြအုံးမယ်။
ကျွန်တော်အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ကဏ္ဍကတော့ ရှိပါသေးတယ်။၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို အကုန်လုံး တက် စေချင်ကြတယ်ပေါ့၊ လူတွေက အားလုံးပါဝင်ရေးမူမှာ ရပ်တည်ထားကြတာကို လက်မှတ်မထိုးလိုက်တဲ့ အဖွဲ့ တွေဆိုတာက အားလုံးပါဝင်ရေးမူမှာ ရပ်တည်ထားလို့ဘဲ မထိုးဖြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ အခု အစိုးရက ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံကို တက်ရောက်မယ်ဆိုရင် NCA ကို ဖြတ်ပြီးသွားရအုံးမယ်။NCA ကို ဖြတ်ရအုံးမယ် ဆိုရင် အားလုံးပါဝင်ရေးမူဆိုတာ မအောင်မြင်လောက်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ သုံးဖွဲ့ကို (AA၊ TNLA၊ MNDAA)လက်မခံဘူးပေါ့။ အဲ့ဒီအပေါ်မှာ အခက်အခဲတွေ ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာ နိုင်ခြေတွေ ရှိနေတယ်။
တကယ်လို့များ အခြားအဖွဲ့တွေက ကျွန်တော်တို့ မပါဘဲ သွားမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ မငြိုငြင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီမူကို ဆွေးနွေးကြမှာပါဘဲ။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့အကျိုးကိုတော့ ကိုယ်စားပြုမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်လူမျိုး တစ်ခုတည်းဆိုတာထက် အကုန်လုံး ပြည်ထောင်စုသားတွေပဲပေါ့လေ။ အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျပါဝင်ချင်တာပေါ့လေ။ သူတို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့က ကန့်ကွက်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ သူတို့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ကို မပါခဲ့လို့ပေါ့ NCA လက်မှတ်မထိုးလို့ အစိုးရက စစ်ဖိနပ်ဝတ်၊ စစ်တိုက်အုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ က ပြန်ပြီး တိုက်နေရအုံးမှာပါဘဲ။အခြေအနေကတော့ ဒီလိုဖြစ်လာရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့ ဗျာ။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာလည်း တတ်နိုင် သမျှ ဖော်ပြပြီးပြီ၊ ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုလည်း အပြုသဘောနဲ့ ကြေညာထားပြီးပြီ။သူတို့တိုက်လာရင်တော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ခုခံနေရအုံးမှာပါဘဲ။
မေး ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ခုဏကပြောသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့ လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ အဖွဲ့တွေက အားလုံးပါဝင်ရေးမူကို ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ်တို့ကို ချန်ထားပြီး သူတို့ သီးသန့်အရင် တက် မယ်ဆိုလည်း တက်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ သူတို့နဲ့ကော ဗိုလ်မှူးချုပ်တို့ အကြားမှာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ် ထားပြီးပြီလား ခင်ဗျာ?
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့က နှစ်ပေါင်းများစွာ လက်တွဲလာတဲ့ ရဲဘော် ရဲဘက်တွေပါဘဲ၊ သူတို့ လည်း အကုန်လုံး ပါဝင်မှဘဲ ပြဿနာက ပြီးမယ်ဆိုတာကို နားလည်တဲ့ အတွက် သူတို့ မထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ် ။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် အခုဘဲ CNF(ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး)နဲ့ စကားပြောပြီးလာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကို CNF က ချင်းအဖွဲ့ပေါ့နော် သူတို့ ချင်းပြည် အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်နယ်စပ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်စပ်တွေမှာ အပစ်အခတ်တွေဖြစ်တော့ ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဝင်ပြီး လှုပ်ရှားတယ်။ အစိုးရ စစ်ကြောင်းတွေလည်း အများကြီးဘဲ အဲ့ဒါ CNF ကတောင် ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ ဒီလို ဒီလို ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲလိုဆိုတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာက သူတို့(တပ်မတော်) လာရင် ကျွန်တော်တို့ တိုက်ရမှာဘဲ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဆင်ခြင်စေချင်တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ (CNF) ကျွန်တော်တို့ကို လာပြောသလို အစိုးရကိုလည်း သွားပြောသင့်တယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ စစ်က နှစ်ဖက်စလုံးဖြစ်နေတာကြီးကို ဒါကြောင့်မလို ပြည်တွင်း စစ်ဆိုတာ တစ်နေရာမှာ ရပ်ပြီးတော့မှ တစ်နေရာမှာ မရပ်ရင်လည်းဘဲ အဲဒီရဲ့ဂယက်တွေကို လူထုက ခံစားရတာ။ ပြီးပြည့်စုံသော ငြိမ်းချမ်းမှုကို လူထုမရနိုင်သေးဘူးပေါ့လေနော်။ ဒီလိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြေအနေတွေက ချောချောမောမောနဲ့ ငြိမ်းချမး်ရေးကို ရောက်မယ့် အလာအလား မရှိဘူးပေါ့။
တကယ်လို့များ ခွဲပြီးမှ သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် ညီညွတ်ရေးလည်း ယိုယွင်းသွားလိမ့်မယ်။ အစကတည်းက အားလုံးပါဝင်ရေးမူပေါ့လေနော် အဲ့ဒါကို စည်းကမ်းတစ်မျိုးတည်း မူတစ်မျိုးတည်းနဲ့ အကုန်လုံးလာပါ၊ ညီညီ ညွတ်ညွတ်လာပြီး ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ပြဿနာပြီးတယ်။အခုက ဒါမျိုးဖြေရှင်းတဲ့ နည်းကို (တာပေါ်စတန်နက်) လို့ ပြောတာပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့က ဟိုအဖွဲ့ကို မူတစ်မျိုး ဒီအဖွဲ့ကို မူတစ်မျိုး ချဉ်းကပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အကုန်လုံး ရှုပ်ကုန်မယ်။ ပြီးရင် ဒါ တန်းတူ ညီမျှရေးအခြေခံပေါ်မှာ မလုပ်ဘူးပေါ့နော် အဲ့လို ပြောရမှာပေါ့။
မေး- ခုလို ပြောကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Previous ပင်လုံတိုင်းရင်းသားလူငယ်ညီလာခံသို့ မွန်လူငယ်စာတမ်းတင်သွင်းဖတ်ကြား
Next EAO’s စုံညီအစည်းအဝေး ကိုယ်စားလှယ်များ နောက်ဆုံးနေ့မြင်ကွင်းများ(MNA)